Ganaax u imanaya dadka sharci darroda filimada ku soo koobigareeysta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kun qof oo loo soo tuurayo warqad ganaax ah. sawir: Damian Dovarganes
Ganaax u imanaya dadka sharci darroda filimada ku soo koobigareeysta
Raadrac lugu sameeyay dadkan
La daabacay fredag 2 september 2016 kl 10.31
Sbuucyada soo socda ayaa tiro gaadhaysa kun qof loo soo tuuraya warqado sheegaya in ganaax 2000 oo koroon laga rabo. Sababta ayaa ah in ay si sharci darro ah u koobigareeyeen filimada iyo barnaamiyada laga daawado internetka.
Waa shirkada deymaha ururisa ee magaceedu yahay Gothia Inkasso oo baadhitaan ku sameeysay 150 ka mid ah filimada iyo barnaamijada internetka laga daawado. Shirkadan ayaa raadraac ku sameeysay dadka barnaamijyadan internetka ka soo koobigareeystay ee aan lacagta bixin.
Shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa olole ku saabsan in sharcigu ogoleeyn in barnaamijyadan laga soo koobigareeysto internetka iyada oo aan lacag bixin. Waa sida u telefishinka la iska daawado ee SVT bogeeda ku soo qoreen.